Goota Agarii Tulluu – OROMP4 Studio
Agarii Tulluu from Serfdom to a Revered Oromo Hero
Waa’ee Goota Oromoo kana hangam beektu laata? Ani yeroon dhaggeeffadhee baayyee garaa koo na raasee. Hundumtuu kan dhaggeeffachuu qabu!!! mee al tokko gurra keessaan achii as qabaa ti seenaa nama kanaa dhaggeeffadhaa!!
Suurri argaa jirtan
kun GOOTOTA ilmaan
Oromoo roorroon hammaannan
Wayyaanee fuuldura gootummaa dhaan falmaa dhaabbatanii utuu lolanii kanneen harka diinaatti gaafa kufan wayyaaneen gochaa suukaneessaa akkanaatiin uummata yaamtee raawwii akkasii jiilchaf ilmaan Oromoo kanneen irratti raawwatte. Oromoo diina isaa ajjeessaa, falmaa du’uun ykn wareegamuun kabajaa guddaa dha. Bakki gochaan fashitii Wayyaanee kun itti raawwatame godina SALAALEE, aanaa Darraatti baatii dabre gaafa 09/12/2014 ture.